Vaovao - Fa maninona no mpisoloky?
Ity no vokarinay vaovao misy famolavolana kinova vaovao. Ny kitapo dia vita amin'ny plastika multilayer. Ny sosona ivelany (polyamide + polyethylene) dia miaro amin'ny oxygen sy ny hamandoana; ny hakitroka sy ny firafiny dia mety tsy mitovy arakaraka ny filan'ny mpanjifa na ny vokatra. Ny sosona anatiny (polyethylene) dia elastika ary mahatohitra ny triatra.
Raha manana fangatahana hafa ianao dia afaka manatsara ny fitaovana ho sakana avo na sakana maivana. Ny fenitra mahazatra dia 5 L, 10 L, 18 L ary 20 L. Vonona izahay hanome ny mpanjifa santionany maimaimpoana.
Isika koa dia manana ny milina famenoana ho an'ny kitapo che cheseer ao anaty boaty. Raha liana amin'izany ianao dia handefa fanazavana fanampiny izahay.
Manambatra ny tombotsoan'ny tontolo iainana amin'ny fonosana nentim-paharazana anaty fonosana sy maro an'isa isika
ny tombony azo avy amin'ny kaontenera henjana.
Mavesatra be ary mora entina ny kaontenera.
Voaro amin'ny hazavana sy ny rivotra ny vokatra, ahafahany mitahiry ny fananany rehetra mandra-pahatapitry ny lany tanteraka.
Ny endriny tsy misy fangarony dia mamela ny 99% ny ranoka ho foana.
Ny fikorianan'ny famoahana dia tsy tapaka ary tsy miova, tsy misy miboiboika na fiparitahan'ny rivotra.
Ny kitapo dia mijanona tsy mihetsika tanteraka ao anaty boaty, amin'izay dia manakana ny satroka tsy hihetsika mandritra ny fitaterana.
Fampihenana ny habetsaky ny fonosana, na rehefa foana na rehefa feno.
Mitahiry vola be amin'ny habakabaka sy ny vidin'ny logistika ary ny tontolo iainana.
Faritra lehibe ho an'ny fifandraisana an-tsary. Ny boaty dia namboarina manokana. Satria vita amin'ny baoritra izy io, dia azo atao pirinty ny lafiny rehetra, izay manome faritra velarana fifandraisana lehibe.
Fanohanana ara-teknika sy famolavolana namboarina.
Manana sakantsakana sy fanidiana ary valves be dia be izy io.